विषादी परीक्षणबारे उद्योगमन्त्रीः भाउ बढ्यो, आफैँमाथि नाकाबन्दी जस्तै भयो | Makalukhabar.com
एउटा विषयले बजार गरम छ । माननीय जीहरु पनि तान्नु भएको छ । बडा खुसीको कुरा हो । नेपाली जनताको हकहितका लागि तात्नु राम्रो कुरा हो । तर कुन प्रलोभन, कुन नियतले त्यो प्रश्न कहाँबाट उठिरहेछ ? लामो समय सत्तामा बसेर केही गर्न नसकेकाहरुको अहिले अर्कै फूर्तीफार्ती देखिन्छ ।
हामीले त विषादी खानु हुँदैन भनेर निर्णय गर्याैँ । त्यसका लागि जाँच गरेर ल्याउने तयारी सुरु गर्यौँ । तर त्यसका लागि हामीसँग क्षमता नै रहेनछ । म सबै माननीयज्युहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु । एक पटक गएर कृषि मन्त्रालयको उचाई बुझ्नुपर्यो, क्षमता कति छ ।
हामीले त राम्रै गर्न खोजेका थियौँ । निर्णय त गर्यौँ । तर कृषि मन्त्रालयमा त्यो क्षमता रहेनछ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । यो मेरो कमजोरी हो । हामी अघि बढेकै थियौँ । राम्रो काम गर्न खोज्नुलाई कसैले अपराध वा केही बुझ्छ भने अर्कै कुरा हो । हुन त मैँले हिजो नै जवाफ दिनुपर्ने हो तर, आफ्नै कारणले गर्न आउन सकिनँ ।
आज पनि यसको विरोधमा नारा जुलुस छ, लामो जाम छ । आफू त्यत्रो लामो समयसम्म बस्दाखेरी केही गर्न नसक्ने । सरकारले अहिले गर्न खोज्दा तर केही नपुगेको अवस्थामा चैँ विरोध गनुपर्ने ?
मन्त्रीजीले के जवाफ दिनुभयो थाहा छैन । तर उहाँकै बाट के जवाफ आएको छ भने हाल नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने केन्द्रीय तहमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मात्र अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला रहेको । काठमाडौंमा मात्र रहेको र अरु ठाउँमा नरहेको । सचिवले पठाउनु भएको पत्रमा छ । मन्त्रीजीले पनि सचिवले पठाएको पत्र पढ्नु भएन कि मैँले जस्तै । कस्तो हुन्छ भने नि, सचिवले ल्याउँछन्, हामी विश्वास गरेर सही गरिदिन्छौं ।
तर नेपाल विचित्रको भयो । प्रतिपक्ष रचनात्मक हुन्छ रे । यहाँ त पक्ष नै कस्तो न कस्तो देखियो । पक्षका साथीहरुले पनि कस्ता कस्ता प्रश्न उठाउन थाले । रचनात्मक हो कि ध्वंशकारी ? जिज्ञाशा राख्नु एउटा कुरा हो, उफ्रिनु अर्कै कुरा हो । यहाँ दुईवटा प्रवृत्ति देखिन्छ । एउटा, पाएपछि जे पनि गर्न खोज्ने । अर्को, विपक्षीमा बस्यो वा कुर्सीमा जान पाएन भने पुरै अराजक बनिदिने । यसले देश निमार्णय हुँदैन । यथार्थमा टेकेर बहस गरौं । हामी पनि कमजोरी स्वीकार गर्छौं तर तिललाई पहाड बनाउनु राम्रो होइन । माननीयजीहरु पनि हावाको तलमा बोल्नु भएन । गएर हेर्नुस्, हाम्रो के क्षमता छ ।
फेरि आज हामीले बिगारिदिएको होइन । छैँदै छैन के बिगार्नू ? अनि विदेशीको अगाडि झुक्यो रे ? जसको आफ्नै बानी छ झुक्ने, तिनीहरुले विदेशीको अगाडि झुक्यो भनिरहेका छन् । न झुक्ने न लड्ने भिड्ने, आवश्यकता अनुसार डिल गर्ने हो ।
म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी कसैको दबावमा पर्ने छैनौं । व्यवहारबाट के देखियो भने हामी आफैं नाकाबन्दी गर्नेतिर गयौं । भाउ बढ्न थाल्ने भयो । त्यसअनुसार निर्णय गरिएको हो ।
(राष्ट्रिय सभाको आज (सोमबार) को बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले दिएको जवाफ)
अध्ययनले भन्छ दैनिक आधा घण्टा व्यायाम गरे उमेर बढ्छ